Sida loo rakibo AnTuTu qalabkaaga Android | Androidsis
Sida loo rakibo AnTuTu qalabkaaga Android
Waa mid ka mid ah jaangooyooyinkii ugu fiicnaa maanta ee ka jira shabakadda shabakadaha. AnTuTu waxay kasbatay xushmad badan, Tan iyo markii ay u adeegto si loo ogaado waxqabadka qalabka, oo ay ku jiraan casriga casriga ah ee casriga ah iyo kuwa casriga ah, telefoonno badan ayaa horay u soo maray saldhigiisa.
AnTuTu wuxuu falanqeeyaa go'aamiyeyaasha terminal, oo ay ku jiraan mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah, isdhexgalka isticmaalaha, sidoo kale awoodda processor, xawaaraha RAM, keydinta iyo waxyaabo kale oo badan. Hawshu waxay ku qaadataa habsocod gaaraya shan daqiiqo, oo muujinaya dhamaadka natiijada shakhsi ahaaneed ee dhinac kasta.
Codsiga gaarka ah wuxuu ku siinayaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan magacaaga iyo moodeelkaaga, haddii horey loo falanqeeyay wuxuu ku tusi doonaa dhammaan faahfaahinta qodob ahaan. AnTuTu waa codsi heer sare ah, waxa ugu fiican ee ku saabsan marka laga reebo falanqaynta ayaa ah inay lacag la’aan tahay waxaana lagu heli karaa Isbaanish, marka lagu daro luuqado kale oo badan.
Codsiga waxaa hadda laga heli karaa dhammaan noocyada Android, dib bishii Maarso waxay ka tagtay Play Store waxaana lagala soo bixi karaa oo keliya bogga rasmiga ah. App-ka culeyskiisu wuu yaraa, wuxuu soo degsadaa wax ka yar hal daqiiqo oo rakibidda waa inaad siisaa rukhsadyo qaarkood.
Si aad ugu rakibto AnTuTu qalabkaaga Android waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Soo dejiso barnaamijka 'AnTuTu' ka xidhiidhkan una sii wad rakibaadda adoo siinaya dhammaan rukhsadaha aad codsato
Marka la rakibo, u bilow sida codsi kasta oo kale, waxay kugu qaadan doontaa dhowr ilbiriqsi oo aad ku soo ururiso dhammaan macluumaadka taleefanka
Isku xirnaanta waa mid cad, oo muujineysa dhammaan xulashooyinka aad ku jaleecsan tahay, hoosta "Ku rakib oo tijaabi" waxaad leedahay soo saaraha iyo moodeelka taleefanka, marka laga reebo waxyaabaha kale ee AnTuTu ku sameyn karto taleefankaaga si aad u hubiso waxyaabo badan oo aad u aragto waxqabadka qalabkaaga
Si aad u sameyso falanqaynta ugu horeysa ee taleefankaaga waxaad u baahan doontaa inaad fuliso hawl yar, kaliya waa inaad gujisaa "rakib oo tijaabi", tani waxay qaadan doontaa waqti macquul ah si loo ogaado waxqabadkeeda guud. Dhibcaha qaabka la isticmaalay, Huawei P40 Pro 5G, waa 497.815 waana mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya.
AnTuTu ayaa ku tusi doonta wax walba oo ku saabsan aaladda, macluumaadka aasaasiga ah, xusuusta, CPU, shaashadda, kamaradaha, batteriga, miisaanka taleefanka, nidaamka hawlgalka, isku xirnaanta, shabakadda, dareemayaal iyo faahfaahin dheeri ah. Marka laga reebo AnTuTu waxaad haysaa codsiyo kale oo lagu falanqeeyo qalabkaaga, waxaa ka mid ah Geekbench, 3DMark iyo GFXBench.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo rakibo AnTuTu qalabkaaga Android
Realme Narzo 30A iyo Realme Narzo 30 Pro 5G waxaa lagu shaaciyey baytariyada waaweyn iyo Android 10